Dowladda oo soo rogeysa ganaax adag (SAWIRRO) | Dhacdo
Dowladda oo soo rogeysa ganaax adag (SAWIRRO)
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa maanta sheegay in badan oo ka mid ah awaamiirtii la soo rogay in la iska dhego-tiray, sidaasi daraadeedna ay soo roggi doonaan ganaax ka dhan ah qofkii aan u hoggaansamin awaamiirta looga hortaggayo faafitaanka xanuunsidaha COVID-19.
Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo maanta ka barbar hadlayay qaar ka mid ah Golaha Wasiirada Xukuumadda oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay khatarta sii siyaadeysa ee xanuunka COVID-19 iyo sida aanay inta badan bulshada u raacin talooyinka iyo amarada lagu xakameynayo xanuunkaasi.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa si adag bulshada ugu eedeeyay inaanay waxba ka qaadan awaamiirtii horaantii bishan laga soo saaray yareynta ama ka hortagga xanuunka, haddii si weyn uu ugu faafayo magaalada.
“Weli waxaa jira iskuuladii la yiri hala xiro qaar badan oo furan inay jiraan, waxaa jira dadkii la yiri marka aad wadada mareysaan ama aad BL ama bajaaj raaceysaan ha idin xirnaado afka, weli uma xirna. Goobihii isu imaatinka qaaraa weli la isugu yimaadaa, dad badan ayaa weli jamaacada ku oogga Masaajidada, qaar badanaa ka weyso qaata Masaajida oo la yiri ku soo weyseyso gurigaga, sijaayadda yar ee lagu tukadana adiga horey u soo qaado, waxaas oo dhan waxay ahaayeen jameecadana ha kala fogaato, oo yeysan isku dhawaanin. Talooyinkii la baxshay ayay ahayd, laakiin haddana wax laga qaatay culimo iyo caamo way yar tahay.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in marka la gaaro 15-ka bishan uu bilaaban doono ganaax lagu ridi doono dadka aan u hoggaansamin awaamiirta.
“Dadka in la ciqaabo ayaa imaaneysa marka, ciqaabtu maxay noqoneysaa? Ganaaxaa ku imaan doono dadka.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho oo intaa ku daray “15-ka bishan ayay bilaaban doontaa ganaaxa, ganaaxaasoo qof awaamiirtii la siiyay ama taladii la siiyay khilaafay, aan laga dhaafi doonin. Haddii yahay goob ganacsi, haddii yahay qof BL ama bajaaj saaran ama qof wadada maraya.”
Duqa Muqdisho oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doono qof kastoo talooyinka caafimaad ee la bixiyay jebiya.”